Wararka Suuqa Ciyaaraha Maanta: Ziyech, Camavinga, Dembele, Dest, Cavani, Aleksandar Mitrovic | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Ciyaaraha Maanta: Ziyech, Camavinga, Dembele, Dest, Cavani, Aleksandar Mitrovic
AC Milan ayaa rajeyneysa inay lasoo saxiixato garabka Chelsea iyo Morocco Hakim Ziyech, 28. (Calciomercato).
Liverpool ayaa isha ku haysa in ay u dhaqaaqdo xiddiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka France ee Eduardo Camavinga oo 19 jir ah (El Nacional).
Newcastle United ayaa xiriir la sameysay wakiilada weeraryahanka Barcelona iyo xulka France Ousmane Dembele, oo 24 jir ah, inkastoo kooxda reer Spain ay weli isku dayeyso inay qandaraaska u kordhiso. (Fabrizio Romano)
Tottenham ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo daafaca dhexe ee Juventus iyo Netherlands Matthijs de Ligt, 22. (Sun).
Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in ay jirto su’al wali ku taagan mustaqbalka Alexandre Lacazette iyo Eddie Nketiah. Weeraryahanka France Lacazette, 30, iyo weeraryahankii hore ee England ee Under-21, Nketiah, 22, ayaa labaduba qandaraaskoodu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. (The gaudian)
Nketiah, oo 22 jir ah, ayaa doonaya inuu si joobta ah u tago inkastoo Gunners ay dooneyso inay qandaraaska u kordhiso. (Dailymail)
Sevilla ayaa kula biirtay Barcelona tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka reer Uruguay Edinson Cavani, oo 34 jir ah, kana tirsan Manchester United. (Mundo Deportivo)
Deynta Barcelona ee 849 milyan ginni kama joojin doonto inay 55 milyan ginni kula soo wareegto 21 jirka reer Spain ee Manchester City Ferran Torres. (Dailymail)
City ayaa markii hore Torres ku doonaysay 70 milyan oo gini ka hor inta aanay ku degin 55 milyan oo gini, taas oo la bixin doono afar qaybood – midda ugu horreysa ee la bixiyo xagaaga dambe. (Marca)
Tababaraha Tottenham Antonio Conte ayaa go’aansaday in garabka reer Holland Steven Bergwijn, oo 24 jir ah, uu weli mustaqbal ku leeyahay kooxda inkastoo ay xiiseynayaan kooxo dibeda ah. (Sky Sports)
Chelsea ayaa xiiseyneysa inay u dhaqaaqdo daafaca Barcelona iyo USA Sergino Dest, 21. ( Metro).
Ralf Rangnick ayaa qarka u saaran inuu la xiriiro kooxdiisii ​​hore ee RB Leipzig si ay u helaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Mali Amadou Haidara, oo 23 jir ah, isagoo raadinaya bedelka Nemanja Matic, 33 jir ah, ee Manchester United . (Mirror)
Juventus ayaa isha ku heysa saxiixa Manchester United EE Anthony Martial, 26, iyo Arsenal ee Gabon weeraryahanka Pierre-Emerick Aubameyang, 32. (Gazzetta dello Sport)
Martial ayaa mushahar ahaan u qaata 240,000 oo Gini todobaadkii ayaa ka dhigaysa ka tagistiisa United mid adag. Sport
Juventus ayaa sidoo kale xiiso u qabta inay si lama filaan ah ula soo wareegto 27 jirka Fulham iyo Serb Aleksandar Mitrovic. (90 min)
Tottenham ayaa hogaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Ac Milan iyo xulka qaranka Ivory Coast ee Franck Kessie. Kooxda ka dhisan waqooyiga London waa inay la dagaalanto xiisaha uga imaanaya Paris St-Germain , kuwaasoo sidoo kale isha ku haya 25 jirkaan. (Calciomercato)
Dhoolatuska Muuse Suudi oo Dhabar Jab u ah Kooxda Villa Somlia...
Deg deg Musharaxiinta oo Fashiliyay Qorshe uu watay Farmaajo, Rooble oo...